ခမျြးဧအိမျ: ဆရာအောင်သင်း၏ စာပေဟောပြောပွဲများ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကပင် ထွန်းကားလာခဲ့သောကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့၊ ကိုယ်ပိုင် အစဉ်အလာများဖြင့် ရပ်တည်ရှင်သန်လာခဲ့သော လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော ကိုယ်ပိုင် စာပေအရေးအသား အက္ခရာစာလုံးများ မရှိကြပဲ မွေးစားအသံထွက် စာလုံးများနှင့် ရပ်တည်နေကြသော နိုင်ငံများစွာရှိပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာ ကိုယ်ပိုင်စာပေ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြင့် အမိမြေမှ ဝေးကွားနေသော မြန်မာလူမျိုးများအဖို့ ဂုဏ်ယူတတ်လျှင် ဂုဏ်ယူနိုင်ဖွယ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
Posted by ချမ်းလင်းနေ at 3:27 AM
အရမ်း တန်ဖိုး ရှိပါတယ် .. ကျေးဇူး အထူးပါရှင် ..း)
လသာည February 21, 2011 at 12:48 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဆရာဦးအောင်သင်းရဲ့ စာတွေကို တအားကို သဘောကျတဲ့ ဆရာတပည့်တစ်ယောက်ပါ
May everybody be happy and healthy! February 21, 2011 at 1:20 PM
blackcoffee February 21, 2011 at 5:27 PM
လိုချင်တာလေးတွေကို ဒေါင်းသွားတယ်ဗျို့ ...
ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ။ နောက်လဲ ကြုံရင် လာဒေါင်းဦးမယ်နော်....
တောက်ပကြယ်စင် February 21, 2011 at 6:35 PM
ဆရာအောင်သင်းဆိုတာ ဒီလိုရုပ်ရှိသကိုးခင်ဗျာ၊ နာမည်သာ ကြားဖူးနေတာ၊ စုံလင်စွာ ပညာမရှာခဲ့မိလေတော့ မတွေ့ဖူးလိုက်ရဘူးပေါ့၊ ခုမှမြင်ဖူး ကျေးဇူးတင်တယ်လေ၊ ကိုချမ်းလင်းနေ...
wow!!! အများကြီးပဲ ပျော်စရာကြီး .. :D